Cash Splash3Reel | £ 200 အထိအပိုဆုရယူနိုင်သော | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့! Cash Splash3Reel | £ 200 အထိအပိုဆုရယူနိုင်သော | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့!
Cash Splash3Reel | £ 200 အထိအပိုဆုရယူနိုင်သော
Play Cash Splash3Reel Casino Slots Online & သင်ကအနိုင်ရမည်ဟုအဘယ်အရာကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
ရယူ3x Cash Splash Symbols and HIT the Progressive Jackpot
2 Wild Symbols pays out 1,600 ဒင်္ဂါးပြား
3 x Seven Icons pays out 300 ဒင်္ဂါးပြား, whereas2သို့မဟုတ် 1 will payout 200 သို့မဟုတ် 100 coins respectively
3 x က3– Bar Icons pays out 150 ဒင်္ဂါးပြား, whereas2သို့မဟုတ် 1 will payout 100 သို့မဟုတ် 50 coins respectively
3 x Cherry Symbols pays out 60 ဒင်္ဂါးပြား, whereas2သို့မဟုတ် 1 will payout 40 သို့မဟုတ် 20 coins respectively